ARCHIVE, BLOG, OFF THE BEAT, SHARE MARKET, STOCK » म लगानीकर्ता र इमान्दार कार्यकर्ता ! काँग्रेस हार्दा दुखी भएको म आरजु हार्दा यसकारण खुसी छु !
जनताले यसपाली काँग्रेसलाई सुध्रन चेतावनी र समय दुवै दिएका छन् । पैसाको लोभ परेर होइन कार्यकर्तालाई पनि माया गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् । यसलाई ध्यानमा राखेर काँग्रेस अगाडी बढ्दा पक्कै पनि अर्कोपटक जनताले फेरी काँग्रेस चुन्नेछन् भन्ने कुरामा शंका छैन । अधिकांस ठाउँमा कांग्रेस हारेको छ । यो पराजयसँगै दुखी हुने थुप्रै कांग्रेसका इमान्दार कार्यकर्ताहरुमध्ये म पनि एक हुँ । कांग्रेस हार्दा मलाइ पनि दुखेको छ ।
काँग्रेस किन हार्यो भन्ने कुरामा धेरैका धेरै थरी विश्लेषण छन् । एमाले र माओवादी केन्द्र वाम गठबन्धन बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू नै निर्वाचनमा पछारिएको विश्लेषण पनि गरिएको छ । कांग्रेसको जड मानिएका कैलाली, कञ्चनपुरमा कांग्रेस शून्य बन्न पुगेको छ । कांग्रेस राजनीतिको विरासत नै मानिएको मोरङमा पनि स्थिति निकै नै तनावपूर्ण बन्यो कांग्रेसका लागि !
यो पराजयसँगै दुखी भएका कांग्रेसहरुमध्ये म पनि एक हुँ तर म आरजु देउवा हार्दा भने खुसी छु । किन कि मैले आरजुले गरेको गलत कार्यलाई नजिकबाट नियालेको छु । ती मध्ये 'नेप्से-काण्ड' पस्कने प्रयास गरेको छु ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा जीएम नियुक्ति हुँदै थियो । प्रतिष्पर्धामा दुइ कांग्रेस र एक नयाँ शक्तिका नेता थिए । यसअघि भ्रष्टाचार र यौन दुराचारको आरोप लागेका नयाँ शक्तिका नेता चन्द्र साउद, इमान्दार कांग्रेस कार्यकर्ता र निकै नै चर्चित बैंकर मनोज ज्ञवाली र प्राध्यापक प्रमोद राज शर्मा प्रतिष्पर्धामा थिए । तर आरजुको सेटीङमा करोडौं घुस खुवाएर नयाँ शक्तिका नेताले बाजी बारे ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर को ठाडो आदेशमा नेप्सेको जीएमका लागि उम्मेदवार बनेका काँग्रेस निकट उम्मेदवार प्रमोद राज शर्मा र मनोज ज्ञवालीलाई लत्याउँदै शेर बहादुर देउवाले यौन काण्डमा परेका र 'इन्साइडर ट्रेडिङ' जस्तो गम्भीर अपराधका आरोपित र माओवादीबाट नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेका चन्द्र साउदलाई नेप्सेको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेपछि कांग्रेसभित्र नै पार्टी ठुलो कि पैसा भन्ने बहस सुरु भएको थियो । नेप्सेको हाकिम हुनका लागि साउदले झन्डै ३ करोड रुपैयाँ आरजु देउवालाई बुझाएको चर्चा चलेपनि आरजु यसबारे केहि पनि बोलेकी थिइनन् ।
साउदको प्रतिष्पर्धामा निकै नै स्वच्छ छविका प्रमोद राज शर्मा र मनोज ज्ञवाली थिए । नेप्सेको जीएममा नियुक्त भएका चन्द्र साउद सुदुरपश्चिम भएका नाताले देउवा निकट कांग्रेस नेताहरुलाई चिन्ने भएपनि उनीचाहिं पहिला माओवादी थिए भने पछि नयाँ शक्ति नेपाल प्रवेश गरेका थिए । उनी नयाँ शक्ति नेपाल प्रवेश गरेपछि उनलाई नयाँ शक्ति नेपाल प्रवेश गरेकोमा बधाई दिएका फेसबुक स्ट्याटसहरु अझै पनि छन् ।
नेप्सेमा साउद नियुक्त भएपछि कांग्रेसी बैंकर, र कर्पोरेट क्षेत्रमा रहेका कांग्रेसी कार्यकर्ताबीच पार्टी भन्दा ठुलो पैसा रहेको बहस सुरु भएको थियो । साउदलाई नेपाल इन्सुरेन्स डुबाएको देखि महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको समेत आरोप छ । यो त प्रतिनिधि घटना र मैले देखे बुझेको घटना मात्रै भयो । यसरी खुलेआम घुस कति ठाउँमा खाइन् होला आरजुले ? यसको अनुसन्धान गर्न अख्तियारले सक्छ ? यसको हिसावकिताव कसले माग्ने ?
सेयर बजारमा लगानी गरिरहेको म अहिले साउद पीडीत बनेको छु । बुझाएको पैसा उठाउने नाममा भ्रष्टाचारमा साउद लिप्त हुँदा अनलाइन ट्रेडिङ आउन सकेको छैन । कांग्रेसी कार्यकर्ता त्यहाँ पुगेको भए अहिले सम्म नेप्सेमा कायापलट भइसक्ने थियो । त्यसैले नेपाली कांग्रेस हारेकोमा दुखी भएको म आरजु देउवाले हार्दा भने खुसी छु ।
Tags : ARCHIVE, BLOG, OFF THE BEAT, SHARE MARKET, STOCK